My first day at new Job, အလုပ်အသစ်၏ပထမဆုံးရက် ﻿
My first day at new Job, အလုပ်အသစ်၏ပထမဆုံးရက်
ချိတ်ဆွဲရန်စာတန်း: jobless jobs in myanmar job my job good job career work first day
Starting new carrier should mean new adventures, new possibilities, and new outfits. However, the reality is usually far less glamorous.
People are influence by first impression: Pay attention to appearance and body language. Dress clothes that you feel good in and that are appropriate for the workplace. Make an investigation from all possible resources to easily mix and match to the new corporate cultural.
Be self-confident: Keep in mind that they were impressed you to give you the job. Self-confidence isakey quality for career success.
Do not be shy: is always better listening more that talk but do not be afraid to share your opinions and points
Manage your time: Manage your time that you are able to keep deadlines for study assignments; it's very likely that you're already really good at this. Focus on task-by-task and make priorities
Do not delay the difficult tasks: Knowing how to priorities your everyday jobs are an important part of being successful.
Getamentor: look and askamanager you think will makeagood mentor. Mentoring will help you to better and smother assimilate with the company and developing your career.
အလုပ်အကိုင်သစ်စတင်ခြင်းဟူသည် စွန့်စားမှုအသစ်များ၊ အခွင့်အလမ်းအသစ်များနှင့် အဝတ်အစားအသစ်များပါဝင်သည်။ သို့သော်လက်တွေ့ဘဝတွင်မူခမ်းနားမှုများလျော့နည်းနေပါသည်။
လူတို့သဘာဝအရ မြင်မြင်ချင်းအသွင်အပြင်ဖြင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးတတ်ကြသည်။ ရုပ်ဆင်းအသွင်ပြင်နှင့်ခန္တာကိုယ်အမူအရာများကို အလေးပေးပါ။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အဆင်ပြေသော၊ သက်တောင့်သက်သာရှိသောအဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်၏အလေ့အထ အသစ်များကို လေ့လာပြီး စူးစမ်းပါ။​
ကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။ သင့်ကိုယုံကြည့်မှုထား၍ အလုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ကို သိရှိထားပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည့်မှုရှိခြင်းသည် အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျသော သော့ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
မရှက်ပါနှင့်။ စကားအများကြီးပြောခြင်းထက် နားထောင်ခြင်းက ပို၍ကောင်းသည်ဟု ဆိုသော်လည်း သင်၏အတွေးအမြင်များကို ဖော်ပြရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
သင့်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲပါ။ စာစဉ်များကိုအချိန်မှီတင်ရသကဲ့သို့ ဦးစားပေးအလုပ်များကို သေချာစွာ စီမံခန့်ခွဲပါ။
ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုလုပ်ရန် တုန့်ဆိုင်းမနေပါနှင့်။ ဦးစားပေးသင့်သည့်အလုပ်များကို အဓိကထား၍ လုပ်တတ်ခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းအတွက် အရေးပါသည်။
အကြံပေးပါ။ မန်နေဂျာထံတွင် သင်သည် အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းများပေးနိုင်သူဖြစ်သည်ဟုပြော၍ အကြံများဖေါ်ပြပါ။ အကြံပေးခြင်းသည် လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိရုံသာမက သင့်အလုပ်အတွက်ပါ အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
.Sar Taw Kal NISSIN Co., Ltd....
Upon completion of the two years' courses at Connect, students choose their majors and finish their Junior andSenior years of study in the United States at one of our partner universities. Our courses...
..K.U.S Building Supplies, founded in 2012, specialises in the sales & rental of formwork components and scaffolding systems. To cater to the needs of different contractors for different types of pr...
Cho Cho Co., Ltd.(201)
Strong Source Co., Ltd.(151)
Mandalay Golden Wing Co., Ltd.(134)
Early Dawn Microfinance(90)